Bacary Sagna oo taam u ah inuu dib u soo laabto kulanka Manchester derby – Gool FM
Bacary Sagna oo taam u ah inuu dib u soo laabto kulanka Manchester derby
(Manchester) 08 Sebt 2016 – Difaaca kooxda Manchester City ee Bacary Sagna ayaa shaaca ka qaaday inuu ku rajo wayn yahay inuu safka hore ee Man City ku soo laabto kulanka ay Sabtida wajahayaan Manchester United.
Sagna ayaa ka maqnaa Man City saddexdii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaartay kaddib dhaawac muruqa ka soo gaaray, laakiin waxa uu shaaca ka qaaday inuu taam u yahay kulanka ay Man United ku booqan doonaan garoonka Old Trafford.
33-sano jirkaan u sheegay City TV: “Waxaan dareemayaa wanaag, waxaan lahaa in yar oo nasiino ah, sababtoo ah waxaan wax yar oo jeex ah ka qabay mid ka mid ah Murqahayga.”
“Waxaan lahaa waqti dheer sanadkii la soo dhaafay, sidaas darteed waxaan u baahanahay inaan ka taxadaro jirkayga, laakiin maanta waxaan dareemayaa wax weyn, waxaan idhaha ku hayaa Sabtida.”
Kooxaha Man City iyo Man United ayaan labaduba weli lumin hal dhibic oo Premier League ah xilli ciyaareedkan.
RASMI: Laacibkii kooxda Liverpool ee Jose Enrique oo ku biiray Real Zaragoza... (Goorma ayaa saxaafadda loo soo bandhigayaa?)
Andreas Pereira: “Jose Mourinho wuxuu doonayaa inaan dib u soo laabto xilli ciyaareedka soo socda”